Zayar : June 2013
မြန်မာ apk တွေ ဒေါင်းလို့ ရတဲ့ နေရာလေးပါ
Posted by zayar htut at Monday, June 03, 2013 No comments: Links to this post
Android ပေါ်မှ လက်တွေ့အသုံးချနည်းပညာ စာအုပ်
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ စာအုပ်လေးတွေ တင်ပေးလိုက်တယ်နော်.. သန်းထိုက်( ရွှေရိပ် ) ရေးထားတဲ့ Android ပေါ်မှ လက်တွေ့ အသုံးချနည်းပညာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ.. Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ.. ပီးတော့ Android ဆိုတာ ဘာလဲ အစရှိသည်ဖြင့် ရှင်းပြထားတာလေးတွေပါ...
Android ဖုန်း အသုံးပြုသူတိုင်း Application လေးတွေကို ကိုတိုင် သွင်းနိုင်အောင်.. ပီးတော့ Root ဆိုတာ ဘာလဲ.. ဘာကြောင့် Root လုပ်ကြရတာလဲ.. Android ဖုန်းမှာ မရှိမဖြစ် Application များ စသည်ဖြင့် အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပေးပါတယ်.. အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာရှိတဲ့ ဆိုင်တိုင်း ဆိုင်တိုင်းမှာ ၀ယ်ယူရနိုင်ပေမယ့် E-Book မှ လိုချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ဆိုပီး တင်ပေးလိုက်တာပါ.. သူများစီးပွားရေးကို တုတ်နဲ့ ထိုးနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ကျွန်တော် သိသမျှ၊ တတ်သမျှ၊ ဖတ်သမျှ လေးတွေကို နည်းပညာ ၀ါသနာပါတဲ့ အစ်ကို အစ်မတွေကို သိစေချင်တဲ့ စေတနာလေးပါဗျာ....
သူ့မှာ ပါတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေကတော့ ...
1. Android နှင့် လေ့လာသိစရာ
2. Android နှင့် အသုံးချ Setting ဆိုင်ရာ
3. Application ထည့်သွင်းနည်းများ
4. Root လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပြုလုပ်ရခြင်း အကြောင်း
5. Custom Rom ကို လေ့လာခြင်း
6. မသိမဖြစ် မရှိမဖြစ် Application များ
7. သိထားလေ့လာ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ
8. ကွန်ပျူတာတွင် သုံးမယ့် Android OS တို့ပါပဲ...
ကိုးန၀င်း (9NaWim) v1.1.2 for Android
ကိုးနဝင်းအဓိဌာန်ပုတီးစိတ်တဲ့ Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် ကိုးန၀င်း (9NaWim) လို့ခေါ်တဲ့ Android ဖုန်း application လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကိုးန၀င်းပုတီးစိပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိ ဘယ်နေ့မှာ ဘာဂုဏ်တော်ကိုစိပ်ရမယ်ဆိုတာကို ဒီဆော့ဝဲလေးကညွှန်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုးန၀င်းပုတီးစိပ်လက်စ သူတွေအတွက်လည်း ရောက်လက်စ အဆင့် နဲ့ နေ့ကို ဆော့ဝဲထဲမှာထည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဆက်စိပ်ရမယ်ဆိုတာကို ဆော့ဝဲက ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုးန၀င်း Android application လေးကိုရေးသားသူကတော့ Developer ကိုပြည့်ဖြိုးရှိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် ရှိထားသင့်တဲ့ မြန်မာ application လေးတစ်ခုပါ။ ကိုးန၀င်း (9NaWim) v1.1.2 for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Windows7မှာ Password ဖျက်နည်း/ကျော်နည်း
Kon-Boot ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုနည်းလေးနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးက USB ထဲမှာထည့်ပြီး window login password တွေကိုကျော်ပြီးဝင်တာပါ ကျော်ဝင်တာဆိုတော့ သူရှိပြီးသား ပတ်စ်ဝကိုလည်းဖျက်မသွားပါဘူး USB ကနေBoot တက်ပြီးကျော်ရတာပါ အထဲမှာစာအုပ်လေးပါ ပါတယ်